Nea Aboro Wɔn so Abegu Yɛn Hia Mu | Adesua
NÁ ƐYƐ afe 49 Y.B. mu. Petro, Yakobo, ne Yohane a na “wɔayɛ sɛ adum” no de adwuma bi hyɛɛ ɔsomafo Paulo ne ne yɔnko dwumayɛni Barnaba nsa. Bere a wɔnam amanaman no mu reka asɛmpa no, na ɛsɛ sɛ wɔboa Kristofo a ahia wɔn no. (Gal. 2:9, 10) Ɔkwan bɛn na wɔfaa so yɛɛ adwuma no?
Sɛ yɛhwɛ nkrataa a Paulo kyerɛwee a, yehu sɛ obuu adwuma no asɛnhia paa. Ma yɛmfa krataa a ɔkyerɛw Kristofo a na wɔwɔ Korinto no nyɛ nhwɛso. Ɔkyerɛw wɔn sɛ: “Ɛdefa ntoboa a wogyigye ma akronkronfo ho no, sɛnea mede ahyɛde maa Galatia asafo ahorow no, mo nso monyɛ no saa ara. Nnawɔtwe biara mu da a edi kan no, mo mu biara nhwɛ nea wanya na onyi biribi nsie wɔ ne fie, na amma sɛ bere a mabedu hɔ no ansa na ntoboa gyigye akɔ so. Na sɛ meba a, mmarima a monam nkrataa so bɛpene wɔn so no, wɔn na mɛsoma wɔn ma wɔde mo akyɛde no akɔ Yerusalem.”—1 Kor. 16:1-3.
Bere a honhom kaa Paul ma ɔkyerɛw krataa a ɛto so abien kɔmaa Korintofo no, ɔsan sii so dua ma wohuu nea enti a ehia sɛ wogyigye ntoboa no. Ná eyi bɛma ‘nneɛma akyɛ pɛ ama nea aboro wɔn so no akogu ebinom hia mu.’—2 Kor. 8:12-15.
Bere a Paulo kyerɛw Kristofo a na wɔwɔ Roma bɛyɛ afe 56 Y.B. mu no, na ntoboa gyigye no reba awie ara ne sa. Ɔkae sɛ: “Merebɛkɔ Yerusalem akɔsom akronkronfo no. Na wɔn a wɔwɔ Makedonia ne Akaia no ani gye sɛ wɔde nea wɔwɔ ma sɛ ntoboa kɔma akronkronfo a wɔwɔ Yerusalem no mu ahiafo.” (Rom. 15:25, 26) Paulo kaa saa no, ankyɛ na owiee adwuma a wɔde hyɛɛ ne nsa no. Efisɛ bere a Paulo kɔɔ Yerusalem a wɔkyeree no wɔ hɔ no, ɔka kyerɛɛ Roma Amrado Felike sɛ: “Mede adɔeyɛde brɛɛ me man, ɛne ayɛyɛde.”—Aso. 24:17.
Asɛm a Paulo ka faa Makedoniafo ho no ma yehu su a Kristofo a wɔtenaa ase wɔ asomafo no bere so daa no adi. Ɔkae sɛ ‘wɔsrɛɛ yɛn ara sɛ yɛmma wɔn hokwan na womfi ayamye mu mfa nea wɔwɔ mma.’ Ɔsomafo Paulo tuu Korintofo no fo sɛ wonsuasua wɔn. Ɔkae sɛ: “Obiara nyɛ no sɛnea wasusuw wɔ ne komam, ɛnyɛ amemenemfe anaa ɔhyɛ so, efisɛ Onyankopɔn dɔ nea ɔtew n’anim ma.” Dɛn na ɛkaa asafo ahorow no ma wɔyɛɛ adɔe a ɛte saa? Nea wɔyɛe no boaa ‘akronkronfo ma wonyaa nea wɔpɛ boroo so.’ Nanso ɛnyɛ ɛno nko, na mmom akyɛde no ‘ma wonyaa hokwan daa Onyankopɔn ase pii.’ (2 Kor. 8:4; 9:7, 12) Momma yɛmfa adwene a ɛte saa ara nyɛ adɔe. Sɛ yeyi yɛn yam yɛ adɔe saa a, Yehowa Nyankopɔn behyira yɛn. Na ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ ne nhyira na ɛma onipa yɛ ɔdefo.—Mmeb. 10:22.
Sɛnea na ɛte wɔ ɔsomafo Paulo bere so no, ɛnnɛ nnipa pii yi sika bi ‘sie’ anaa wotwa sika bi to hɔ de gu ntoboa nnaka a wɔakyerɛw ho “Wiase Nyinaa Adwuma” no mu. (1 Kor. 16:2) Ɔsram biara, asafo ahorow de sika yi mena Yehowa Adansefo dwumadibea a ɛhwɛ wɔn man dwumadi so no. W’ankasa nso betumi de ntoboa no akɔ Watch Tower Bible and Tract Society of Ghana, Attention Accounts Department, P. O. Box GP 760, Accra, Ghana. Wopɛ nso a wubetumi de akɔ sikakorabea a edidi so yi: Watch Tower, Barclays Bank, Accra High Street Branch, Account number 048/2746365 anaa Watch Tower, Ghana Commercial Bank, Accra High Street Branch, Account number 1011130008990. Anaasɛ wubetumi de akɔ Yehowa Adansefo dwumadibea a ɛwɔ wo man mu. (Wubetumi de ntoboa a edidi so yi nso akɔ Yehowa Adansefo dwumadibea a ɛwɔ wo man mu.) Sɛ obi pɛ sɛ ɔde check mena address a ɛwɔ atifi hɔ no, ɛsɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wontua mma “Watch Tower.” Obi wɔ agude anaa agyapade a ɛsom bo bi a ɔpɛ sɛ ɔde ma a, obetumi ayɛ saa. Kyerɛw krataa ka ho fa kyerɛ sɛ wode nneɛma no akyɛ koraa.
Obi betumi de sika ama Watch Tower Bible and Tract Society of Ghana ma wɔde ayɛ wiase nyinaa adwuma no. Nanso sɛ ohia a, wɔbɛsan de ama no. Sɛ wopɛ eyi ho nsɛm pii a, wo ne “Accounts Department” nni nkitaho. Wobetumi de address a ɛwɔ atifi hɔ no akyerɛw wɔn anaa wubetumi de telefon nɔma (030) 2712456 afrɛ wɔn.
Sika a Wɔde Sie wɔ Sikakorabea: Obi betumi ayɛ nhyehyɛe de ne sika a ɛwɔ sikakorabea, anaa sika a sɛ ogyae adwuma a wobetua ama no no ama Watch Tower Bible and Tract Society of Ghana anaasɛ sɛ owu a wɔatua ama wɔn, sɛnea ne man mu sikakorabea nhyehyɛe te.
Adwuma Mu Kyɛfa ne Sika a Wɔde Bɔ Bosea: Ebia obi wɔ kyɛfa wɔ adwumam anaa ɔde sika abɔ bosea a wɔbɛsan atua ama no. Obetumi de eyinom nyinaa ama Watch Tower Bible and Tract Society of Ghana.
Adan ne Nsase: Obi betumi de adan anaa nsase a wotumi tɔn ama Yehowa Adansefo adwumayɛbea sɛ akyɛde koraa. Afei obetumi aka sɛ sɛ owu a, wɔmfa fie a ɔte mu no mma Yehowa Adansefo adwumayɛbea. Wo ne baa dwumadibea a ɛwɔ wo man mu nni nkitaho ansa na woayɛ nhyehyɛe a ɛte saa.
Krataa a Obi Yɛ De Kyɛ N’agyapade Ansa na Wawu: Obi betumi ayɛ krataa de akyerɛ sɛ owu a wɔmfa n’agyapade anaa sika mma Watch Tower Bible and Tract Society of Ghana.
Sɛ obi pɛ sɛ oyi ntoboa a yɛaka ho asɛm yi bi a, ɛhwehwɛ sɛ ɔhyɛ da yɛ ho nhyehyɛe to hɔ. Sɛ wopɛ sɛ wofa akwan a yɛakyerɛ yi so yi ntoboa anaa wode biribi kyɛ Yehowa Adansefo ma wɔde boa wiase nyinaa adwuma no a, wubetumi ne “Accounts Department” adi nkitaho. Wubetumi de address anaa telefon nɔma a ɛwɔ ase hɔ ayɛ saa.